चेक प्वाईन्ट राखेर गैरकानुनी रकम उठाउने ६ जना पक्राउ – Rajmarg Online
चेक प्वाईन्ट राखेर गैरकानुनी रकम उठाउने ६ जना पक्राउ
दाङ, साउन २८ । रोल्पा रुकुम ट्रक तथा मिनी ट्रक यातायात प्रालीको बोर्ड राखेर विभिन्न सवारी साधनबाट गैरकानुनी रुपमा रकम उठाउने ६ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पक्राउ गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ सेवार बगाले स्थित घोराही होलेरी सडक खण्डमा चेक प्वाईन्ट नै खडा गरेर विभिन्न सवारी साधनबाट गैरकानुनी रुपमा रकम उठाउनेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने ३४ वर्षीय रामचन्द्र वली, सोही ठाउँ बस्ने २८ वर्षीय चन्द्र खड्का, ३१ वर्षीय नरेश घर्ति, ३३ वर्षीय नन्दबहादुर घर्ति, घोराही १४ का २२ वर्षीय पृथ्वी वली, प्युठान स्वर्गद्धारी नगरपालिका वडा नं. ३ मालारानी घर भई हाल घोराही १४ बस्ने २६ वर्षीय खिमबहादुर पुन रहेका छन् ।
उनीहरुबाट रकम उठाउने ठेली सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरिक्षक विनोद विक्रम शाहीले बताउनुभयो । उहाँले पक्राउ परेकाहरु विरुद्ध मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २५३ को आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा मुद्धा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरेको बताउनुभयो ।
साथै प्रहरीले उक्त संस्था र ब्यक्तिहरुबाट ठगिनु भएका पीडितहरु कोही भए जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।